Dabaaldaga 15 may Ee todobaadkaan socotay oo caawa lagusoo af-jaray muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( mareeg News ) Munaasabada 75 guurada maalintii la aas aasay ururka gobonimadoonka dhalinyarada ee SYL oo todobaadkaan muqdisho ka socotay ayaa caawa lagusoo gaba gabeeyay.
Xaflada lagu soo xeraayay dabaaldaga maalintan milgaha leh ayaa lagu qabtay Xarunta dowlada hoose ee xamar waxaana kasoo qeeyb galay xildhibaano Iyo madaxdax kala duwan oo katirsan hey’adaha dowlada.
Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir Abdikafi Mohamuud Makaran oo xafladan soo xeray ayaa guul lataban karo ku tilmaamay in todobaad ay socotoy dabaal daga maalintaan waxuuna dhalinyarada ugu mahad celiyay dowrkooda hormaka iyo Nabadeeynta caasimada.
Ururka dhalinyarada oo tan iyo dib u yagleelidiisa Dhabarka u xertay kor uqaadida doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin Adeegyada hormarinta dalka iyo ka qeyb galinta siyaasada dhalinyarada ayaa Wada dadaalo hor leh oo lagu xoojinaayo aqoonta iyo garaadka dhalinyarada caasimada.
DEG DEG Degmada waaberi oo Caawa lagu weeraray Bam Gacmeed.